Nsonaazụ ntuli aka na -akwadoghị mgbe ndị Zambia tụrụ vootu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Nsonaazụ ntuli aka na -akwadoghị mgbe ndị Zambia tụrụ vootu
Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche • Akụkọ kacha ọhụrụ na Zambia
Ịme ntuli aka na Zambia
Zambia tụrụ vootu: Dabere na nsonaazụ a na-enwetabeghị, Mr Hichilema nọ ugbu a na ntuli aka yana 64.9% nke votu, onye isi ala Edgar Lungu sochiri na 33.1%. Onye ndoro ndoro ochichi Democratic Harry Kalaba (0.4%) na Fred M'membe nke Socialist Party (0.3%) na -eso ha.
Onye isi ala Zambia bụ Edgar Lungu na-achọ ntuli aka ọzọ.
Onye na -emegide ya bụ Hakainde Hichilema, onye ọchụnta ego ama ama na Zambia.
A na -emechi usoro nkwukọrịta, dị ka SKYPE ma ọ bụ WhatsApp, Facebook ma ọ bụ Twitter n'akụkụ ụfọdụ nke Zambia n'oge a, agbanyeghị mpaghara ụfọdụ yiri ka ha nọ n'ịntanetị ọzọ dịka eTurboNews ọnụ ọgụgụ okporo ụzọ ịntanetị na -abata.
Mgbakọ mbụ na -abaghị uru na -esi na mpaghara dị iche iche na -abịa, agbanyeghị ụda olu ziri ezi na nke adịghị mma na -ezigara nkata mgbasa ozi mgbasa ozi Zambia.
A na -amalite ịgụta votu ikpeazụ n'ụlọ ọrụ ịtụ vootu dị iche iche na mba ahụ. "Jiri nwayọ nyochaa isi mmalite gị mgbe ị na -ekerịta ozi ntuli aka banyere ntuli aka 2021 iji zere ịgbasa ozi ụgha na nke na -eduhie eduhie." bụ ọkwa nke otu ọgbakọ nlekota ụka nke ụka Kraist.
A na -ekpebi ntuli aka ndị Afrịka na mpaghara ime obodo ma na -ama aka na obodo. Nke a bụ okwu Dr. Walter Mzembi, onye bụbu minista na -ahụ maka njem nlegharị anya na Zimbabwe na onye isi otu ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya n'Afrịka. Ọ na -akpọ okwu ya: mgbagha ntuli aka Mzembi!
N'abalị ụnyaahụ, ọ tweeted: "Na -eche nsonaazụ ya na Zambia - abụ nke" Anyị chọrọ ịgbanwe! " - ana m anụ nke ọma? Ma ọ bụ ọ bụ ntị m nwere isi? Ọ bụ ihe pụrụ iche n'ezie!
Ọtụtụ ọnụ ọgụgụ ndị na -edeghị akwụkwọ na -ebu amụma mgbanwe ọchịchị na Zambia n'oge a.
A na-ahọpụta onye isi ala Zambia site na usoro okirikiri abụọ. N'ime ndị otu 167 nke Mgbakọ Mba, 156 ka a na-ahọpụta site na sistemụ izizi na post-post na mpaghara otu ndị otu. Onye isi ala na -ahọpụta mmadụ asatọ ọzọ na mmadụ atọ ndị ọzọ bụ ndị nnọchite anya: osote onye isi ala, Ọkà okwu, na otu osote onye isi oche a họpụtara site na mpụga Mgbakọ Mba. A na -ahọpụta osote onye isi okwu nke abụọ n'ime ndị ụlọ a họpụtara.
Afọ ịtụ vootu na Zambia bụ afọ iri na asatọ, ebe ndị na -aga ime ntuli aka nke National Assembly ga -abụrịrị opekata mpe afọ 18.
Na 28 Julaị odeakwụkwọ ukwu UPND Batuke Imenda wepụtara nkwupụta na pati ahụ nwere ndakpọ olileanya na ụlọ ọrụ gọọmentị nke Onye isi ala Lungu na -eji egbochi onye isi oche UPND Hakainde Hichilema na mkpọsa..
Na 30 Julaị Hichilema na ndị otu mkpọsa ya gbochiri ịbanye na Chipata ma jide ya n'okporo ụzọ ọdụ ụgbọ elu Chipata. Tupu Hichilema abịarute Chipata, ndị uwe ojii adọkala ndị na -akwado ya. Na 3 Ọgọst ndị uwe ojii na Mbala gbochiri Hichilema na ndị otu mkpọsa ya ịbanye n'ime obodo, ndị uwe ojii na -ekwu na ọ chọrọ akwụkwọ ikike ịbanye.
Ziva bụ ọgbakọ na-abụghị nke gọọmentị, nke na-akwado ma na-akwalite ikike ndị ntuli aka na-arịọ Zambia ka ịkpọghee ịntanetị na-asị: “Usoro ntuli aka bụ nke ndị ntuli aka/ndị ntuli aka. #KpọgheTheInternet Kedu ihe kpatara igbochi ịntanetị? Enweghị nghọta na -emebi nsonaazụ ntuli aka a.
Ntuli aka ndị ntuli aka dị elu abụghịkarị akara dị mma maka ndị nọ n'ọkwa, ntuli aka ndị ntuli aka dị elu dị ka akụkọ mpaghara si kwuo.
Obi dị m ụtọ nke ukwuu maka ndị Zambia n'ihi na anyị gosiri
Ahịrị ndị ntuli aka na Zambia ụnyaahụ
Ọnọdụ n'ime Zambia siri ezigbo ike megide mbọ ọ bụla a na -agba ime ntuli aka. A hụrụ ụgbọ ala a ka ọ na -ebu akwụkwọ ntuliaka maka ebubo ịgba wayo. Ndị ntuli aka ahụ hapụrụ ahịrị ha ka ha mee okwu ahụ n'ụzọ na -adịghị mkpa nkọwa ọ bụla.
Ọnọdụ dị na Zambia siri ezigbo ike megide mbọ ọ bụla a na -agba ime ntuli aka.
A hụrụ ụgbọ ala a ka ọ na -ebu akwụkwọ ntuliaka maka ebubo ịgba wayo.
Ndị ntuli aka ahụ hapụrụ ahịrị ha ka ha mee okwu ahụ n'ụzọ na -adịghị mkpa nkọwa ọ bụla!
Ndị Zambia na -achọ mgbanwe pic.twitter.com/g6ZiZwH7ei
Ozi si Zambia kwuru:
Ụtụtụ ọma Zambia! Data na -abata dị ezigbo mma na ọchịchọ ndị mmadụ doro anya. Mana kpachara anya - mgbe ọchịchị na -apụ apụ na -ama jijiji, ọ nwere ike ịmalite usoro siri ike. Ya mere nọrọ jụụ ma lekwasị anya. Anyị ga -eji udo na ịhụnanya chedo votu anyị n'ime obi anyị. Mgbanwe dị ebe a.
Ozi dị mkpa sitere na Zambia na -ekwu Anyị na -akpọ ZICTA ka ọ kpọghee ịntanetị ozugbo ka ụmụ amaala nwee ike ịgbaso usoro ntuli aka wee gaa n'ihu na ndụ ha na -enweghị nsogbu. Ọ bụ ihe ihere na ọbụlagodi PF onye nyere iwu ka emechie ya na -ewepụta nkwupụta enweghị atụ site na VPN.
Zambia na -eru uju maka ịbụ abụ ya Onye isi nchoputa Kenneth Kaunda: Udo, njem nlegharị anya, mgbanwe ihu igwe bụ abụ ya.
More na ntuli aka Zambia pịa ebe a.